Wemubatsiri bvunzo bvunzo: 5 matipi ekupasa | Kuumbwa uye kudzidza
Administrative mutevedzeri bvunzo: matipi mashanu ekupasa
Maite Nicuesa | 03/06/2021 23:19 | Kupikiswa
Kugadzirira kupikisa ndeimwe yemapurojekiti ayo nyanzvi inogona kuongorora pane imwe nguva mune yavo basa. Iri idambudziko rinonetsa, zvisinei, kuwana chinzvimbo chinogara chinopa mukana wekuona kugadzikana kwemabasa.
Makwikwi aya akakwirira nekuti vazhinji vavakwikwidzi vanotora bvunzo uye vanonyorera kune shoma nzvimbo. Administrative mutevedzeri bvunzo dziri kudiwa zvakanyanya. MuTraining uye Studies tinopa iwe makiyi ekupasa bvunzo.
1 Dzidza zvakanyatsonaka iyo agenda
2 Shandisa maturusi anobatsira kudzidza
3 Sangano remisoro
4 Wona nguva yebvunzo
5 Zorora zvakanaka
Dzidza zvakanyatsonaka iyo agenda
Imwe yenjodzi dzekugadzirira vanopikisa neiyo pfupi nguva kutsaura nzvimbo inodiwa kune chero zvemukati. Iko hakuna mashiripiti matipi ekupfuudza anopikisa zvisina basa. Kudzidza kwakakosha, asi kuronga kwakaringana zvakare kwakakosha. Chimwe chezvinangwa zvako chinofanirwa kuve ichi: ipa nguva kune iyo ajenda yese. Ndokumbira utarise kuti panogona kunge paine mamwe maratidziro kumatopu efoni nyowani. Neichi chikonzero, iyo yakasarudzwa ajenda inofanira kugara iri yazvino.
Shandisa maturusi anobatsira kudzidza
Semuenzaniso, matekinoroji ekudzidza zvinhu zvinobatsira kudzamisa ruzivo. Gadzira uwandu hwehunyanzvi hwaungashandisa mune ino maitiro: kusimbisa, kuverenga zvinonzwika, kuongorora, dhayagiramu, kufunga, kutora zvinyorwa… Nzira yega yega inozadzisa dzimwe. Pepa rehurukuro rinonyanya kubatsira pakuongorora. Kubudikidza nemufananidzo wakajeka wemafungiro uye akakosha mapoinzi iwe unogona kuisa akasiyana mazano maererano.
Iwe unogona zvakare kuongorora mukana wekugadzirira manejimendi mubatsiri bvunzo nerubatsiro rwechikoro. Muchiitiko ichocho, tsvaga kuti chii chinopfuura chikamu chevadzidzi vechakati nzvimbo iri. Yakasarudzika academy, iyo ine nyanzvi dzakambopfuura kupikisa, inogona kukutungamira mune ino maitiro.
Karenda yekudzidza ndeimwe yezvinhu zvinokubatsira kuronga nguva. Maawa aunotsaurira kune yega yega zvemukati anoenderana, kune hukuru hukuru, padanho rekuoma kunzwisisa. Isu takambokurudzira kuti iwe uverenge iyoyose syllabus, asi boka misoro nedanho rekuoma.
Nenzira iyi, Iwe unogona kutanga iyo yekudzidzira maitiro kune izvo zvirimo zvine yepakati kana yakanyanya kuoma. Siya mibvunzo iri nyore kwauri kusvika kumagumo eichi chiitiko. Nenzira iyi, nekutanga nezvakawandisa zvemukati, unozvikurudzira nekukunda zvipingamupinyi zvaunosangana nazvo munzira.
Wona nguva yebvunzo
Kufungidzira zuva rekushora kunogona kukubatsira mupfungwa kugadzirira nguva yemuedzo. Perekedza chiitiko ichi neruzivo rwekushanyira mumunhu nharaunda inozoitwa bvunzo. Semuenzaniso, enda kunzvimbo kuti uone nzvimbo.
Neiyi nzira, iwe unojairana nenzvimbo iyoyo uye unowana zvimwe zvehunhu hwayo.. Anopikisa anokutora iwe akananga kupfuura kwako nyaradzo nzvimbo. Naizvozvo, sezvazvinogona, zvakare zvakanaka kuti iwe uwane anchor yeinozivikanwa.
Kungofanana nekubvunzurudzwa kwebasa kusati kwakurudzirwa kuti iwe utarise nharaunda iripedyo, unogona zvakare kuendesa uyu muenzaniso kune yakasarudzika mamiriro kukwikwidza bvunzo dzemubatsiri manejimendi.
Chidzidzo ichi chikamu cheako pfupi-pfupi chirongwa, chinotora nzvimbo yakakosha yenguva yako. Asi iwe unofanirwa kusunungura pane rimwe zuva revhiki kuti utangezve basa nekuwedzera kukurudzira. Uye, nenzira imwecheteyo, zvakanaka kuti zuva risati rasvika bvunzo unonakidzwa naro wakadzikama, uye usina kudzidza. Kusahadzika kunogona kuwedzera, semhedzisiro yetsinga dzinowanzoitika kutungamira kuzuva rebvunzo, iwe paunotarisa pakuongorora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Kupikiswa » Administrative mutevedzeri bvunzo: matipi mashanu ekupasa
Chii chinoitwa nemubatsiri wevanamukoti?
Mabhuku mashanu pamusoro peiyouroeducation yekuverenga muzhizha